Akụkọ - Kedu ka esi ahọrọ ezigbo ọgwụ nje?
84 ọgwụ nje
Olee otú ịhọrọ ezigbo disinfectant?
Ọ bụ ihe a na-ahụkarị ịhọrọ ọgwụ nje dị mma maka ojiji ahụike na ụlọ ọrụ ahụike, nke a ga-eji dị ka obere disinfection nke ihe ndị na-adịghị mkpa. Ugbu a enweghị akwụkwọ nyocha nke ndị ọgbọ na isiokwu a. Disinfection dị irè nwere akụkụ abụọ, ọgwụ na-egbu egbu na omume disinfection. Omume mkpochasị ahụ chọrọ ịhụ na ọgwụ na-efe efe nwere ike imetụ elu niile aka ma zụọ ndị ọrụ ahụike gburugburu ka ha soro ntuziaka dị n'akara ngwaahịa onye nrụpụta. Nchikota nke disinfectant na omume disinfection 2 na-eduga na mkpochapụ elu dị irè. Ekwesịrị ịtụle ihe ndị a mgbe ị na-ahọrọ ọgwụ nje
A na-azọrọ ike microbicidal: ọgwụ nje a ọ nwere ike igbu nje ọrịa ụlọ ọgwụ kacha ewu ewu? Gụnyere nje ndị na-akpata ọrịa na-ebutekarị ọrịa nosocomial? Kedu ọrịa nje na-ebute ọrịa kachasị njọ? Kedu ihe ụlọ ọgwụ gị kacha na-echegbu? Gbuo oge wee nọrọ na mmiri n'elu gburugburu ebe obibi: Ogologo oge ole ka ọ na-ewe ọgwụ nje iji gbuo nje ndị na-ewu ewu na ụlọ ọgwụ? Ọgwụ nje ahụ ọ na-anọ mmiri n'elu ogologo oge akọwara na label?
Nchekwa: Enwere ọkwa nsi nke anabatara? Enwere ogo ire ọkụ anabatara? Enwere opekempe nchedo onwe onye achọrọ? Ọ dakọtara na mbara ikuku nkịtị nke ụlọ ọgwụ? Ọ dị mfe iji: isi a na-anabata? A na-anabata oge ikike? Ma mma nke ngwaahịa na-ezute ihe achọrọ nke ụlọ ọgwụ (dịka ọmụmaatụ, mmiri mmiri, ịgba, rechargeable, disinfecting rags nke dị iche iche nha).
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Hebei Huansheng Low Carbon Technology Co., Ltd.
Anyị na-enye akwa akwa akwa ahaziri ahazi, akara aka nkeonwe, hand sanitizer, ọgwụ nje 84 na ude freckle nlekọta onwe onye.